जैक वा राम्रो सबैभन्दा पहिला भिडियो पोकर विविधताहरू सिर्जना गरिएको थियो, र यो आज धेरै लोकप्रिय रहेको छ।
ज्याक वा बेटरको लोकप्रियताको लागि एक कारण भनेको बुझ्नका लागि सरल भिडियो पोकर खेलहरू हो। तपाईले धेरै हातहरू, जंगली कार्डहरू, बहुलिपिहरू वा बोनस पेआउटहरू सिक्नु पर्दैन।
जैक वा बेटरको जस्तै व्यक्ति किन अर्को कारण हो भने पूर्ण वेतन (सर्वोच्च भुक्तानी) संस्करणले 99.54% भुक्तानी प्रदान गर्दछ र धेरै भूमि-आधारित र अनलाइन क्यासिनोहरूमा पाइन्छ।
यसले अन्य पूर्ण वेतन भिडियो पोकर भेरियन्टहरू समावेश गर्दछ, जुन क्यासिनोहरूमा सामान्यतया पाइँदैन।
यदि तपाईं यस उच्च भुक्तानी र सरल रणनीतिको फाइदा उठाउन चाहानुहुन्छ भने, हामीले जैकहरू वा राम्रो इतिहास, कसरी प्ले गर्न, भुक्तान तालिका र रणनीतिबारे चर्चा गर्दछौं।
ज्याक वा राम्रो इतिहास
मिसिसिपी नदी मूल
किनकी जैक वा बेटर सामान्यतया भिडियो पोकरसँग सम्बन्धित छ, धेरैले सोचेका छन् कि 1970s मा भिडियो पोकर मिसिनहरू क्यासिनो नभएसम्म यो अवस्थित छैन।
तर पिकर मिसिसिपी नदीबारीहरूमा लोकप्रिय भए पछि जैकस वा बेल्ट उन्नीसवीं शताब्दीमा पछाडि जान सकिन्छ।
पहिलो ज्ञात सन्दर्भ जुआलर र लेखक जेएच ग्रीनबाट आउछ जुन 1834 मा, जैक वा बिटरमा तीन कार्ड मन्टको तुलनामा। हरियो महसुस गरे कि जैक वा बेटर राम्रो खेल थियो, जबकि तीन कार्ड म्यान्ट एक धोखा खेल थियो।
मिसिसिपी नदीको उत्पत्ति धेरै प्रकारका पोकरहरू जस्तै, त्यहाँ कुनै स्पष्ट मिति छैन जब मानिसहरूले पहिले जैक वा बिटर खेल्न थाले। यसले ग्रीनको सन्दर्भ छोड्दछ जुन सबैभन्दा पहिला खेलको उल्लेख गर्दछ।
जैक वा राम्रो भिडियो पोकर लोकप्रिय हुन्छ
ज्याक वा बेटर सबै वर्षहरु मा जुआ घेरामा रहेका थिए र अन्तर्वार्ता 1970s मा एक भिडियो पोकर संस्करणको रूपमा पेश गरिएको थियो।
भिडियो पोकर एउटा विफलता थियो जब यो पहिलो 1970 मा क्यासिनोहरूमा पेश गरियो, अर्थात् किनभने यो एक केन्द्रीय प्रविधि एकाइसँग जोडिएको एक टेलिभिजन मनिटर भन्दा बढी थिएन। खेलाडीहरू यी मशीनहरूमाथि भरोसा गर्थे, न त उनीहरूले थप लोकप्रिय स्लट मिसिनहरूबाट टाढाको कुनै कारण देखेनन्।
मध्य 1970s द्वारा, Si Redd र उनको कम्पनी, SIRCOMA Si Redd सिक्का मिसिनहरु, राम्रो भिडियो पोकर मिसिनहरु बनाउन र उनलाई अधिक कैसीनो को वितरण गर्न शुरू गर्यो।
SIRCOMA, पछि आईजीटी ले आफ्नो पहिलो खेल ड्रा पोकर संग मध्यम सफलता को अनुभव गरे, जो5कार्ड ड्रा पोकर हो जो दो जोडे मा भुगतान शुरू हुन्छ।
SIRCOMA जोक्स जोडामा सबै भन्दा कम भुक्तानी परिवर्तन भयो, जसले धेरै भिडियो पोकरको लोकप्रियता बढ्यो। आज, जैक वा बेटर अझै पनि सबैभन्दा व्यापक रूपमा खेल्ने मिसिनको क्यासिनो खेलहरू मध्ये एक हो।
जैक वा राम्रो भिडियो पोकर कसरी प्ले गर्ने
ज्याक वा राम्रो बुटवल
तपाईं आफ्नो हातमा 1 बाट5सिक्किहरु बाट कहीं पनि शर्त गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक भूमि आधारित क्यासिनो एक $ हो0.25 सिक्का विनाश, न्यूनतम bet $ 0.25 र अधिकतम वेजर $ 1.25 बनाउन।
जब हामी पछि आवरण गर्नेछौं, रोयल फ्लश पेआउट एक असामान्य छलांग छ जब एक4सिक्का देखि5सिक्का जीतमा विजयी हुन्छ।
यदि तपाइँ यस वृद्धिको लागि योग्य हुनुपर्दछ र शीर्ष भुक्तानी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँलाई5सिक्काहरू दावी गर्न आवश्यक छ।5सिक्का चाँडो दावी गर्न, अधिकतम बेट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
ज्याक वा अझ राम्रो भुक्तानीको बावजुद, केही खेलाडिहरूले $ प्रति दिन $ 1.25 आरामदायक शर्त लगाउँदैन। यदि तपाईं कम रोलर हुनुहुन्छ भने अझै पनि अधिकतम भुक्तानी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस् कि अनलाइन भिडियो पोकरले सिक्काको डेरिमेन्टहरूसँग एक प्रतिशतको रूपमा कम्तीमा छ।
एकपटक तपाईंले आफ्नो बेटिंग विकल्प चयन गर्नुभए पछि, तपाईंको5कार्ड हात प्राप्त गर्न सौदा बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाइँ आफ्नो हातको मूल्यांकन गर्नुहोस् र जेक वा राम्रो रणनीतिको आधारमा के गर्ने निर्णय गर्नुहोस्।
जब तपाइँले कुन कार्डहरू राख्नुभयो र त्याग्ने निर्णय गर्नुभयो, तान्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको हातलाई अन्तिम रूपमा। त्यसपछि सफ्टवेयर निर्धारित हुनेछ यदि तपाईंको हात वेतन तालिका अनुसार पेआउटको लागि योग्य हुन्छ।
एक चोटि चल्दो भएपछि एकपटक तपाईले शर्त परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। वा, तपाईं समान वेगर प्रयोग गर्न र नयाँ हात प्राप्त गर्न केवल डील क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ।
ज्याक वा राम्रो नियम
जैक वा बेटरले कुनै पनि जंगली कार्डको साथ मानक 52 कार्ड डेक प्रयोग गर्दछ। यस खेललाई प्रत्येक कार्डलाई त्यस्ता फरक फरक पार्दछ जुन तपाइँले वास्तविक 52 कार्ड डेकबाट आशा गर्नुहुने प्रोग्राममा प्रोग्राम गरिएको छ।
अनियमित नम्बर जेनरेटर सफ्टवेयर सुनिश्चित गर्दछ कि हरेक सम्झौता र हात अनियमित छ।
भूमि आधारित क्यासिनोले लेखा परीक्षण गर्न को लागी प्रस्तुत गर्नका लागि यो सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूको भिडियो पोकर र अन्य खेलहरू अनियमित छन्। अनलाइन क्यासिनोहरू उनीहरूको इजाजतपत्रका अधिकार क्षेत्र (हरू) द्वारा निर्दिष्ट गरिएका निर्दिष्टताहरूको पालन गर्नुपर्छ।
ज्याक वा राम्रो परिवर्तन
जबकि जैक वा बेल्ट सिधा हुन्छ, आईजीटी ले केहि नयाँ भिडीयो पोकर संस्करणहरू सिर्जना गरेको छ जुन तपाईंलाई यो खेललाई विभिन्न ढाँचामा प्ले गर्न अनुमति दिन्छ। यहाँ खेलहरूमा एक नजर छ कि मोटो राख्नुहोस् ज्याक वा राम्रो:
ट्रिपल प्ले पोकर
ट्रिपल प्लेले तपाईंलाई तीन भिडियो पोकर हातहरू एकचोटि प्ले गर्दछ, प्रत्येकलाई अलग शर्त आवश्यक पर्दछ। तपाईंले आफ्नो तल हातमा राख्नुभएको कुनै पनि कार्ड अर्को दुई हातमा चमत्कार गरिएको छ। ट्रिपल प्ले पोकर यहाँ चर्चा गरिएको अन्य भेरियहरुको आधार आधार बनाउँछ, जुन बहु बहु ढाँचा पनि प्रयोग गर्दछ।
ट्रिपल प्ले ढाँचामा विशेष गरीएको, गुड टाइम्स भुक्तानीले तपाईंलाई जबसम्म5सिक्किङ्हरू प्रति शर्तमा पुग्छ जब सम्म तपाईले अनियमित बहुलकहरू जित्न सक्नुहुनेछ।
हट रोल भिडियो पोकर
तपाईं 3, 5, वा 10 ह्यान्डहरू एकचोटि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंलाई यो योग्य बनाउनका लागी एक हातमा 10 सिक्काहरू शर्त गर्न आवश्यक छ। हट रोलर गुणक यस फिचरले अनियमित रूपमा पासा रोल मा पर्दा रोल देख्छ र तपाईंलाई दुई पासाको मूल्यको बराबरको गुणस्तर दिन्छ (2x मा 12x)।
हाइपर बोनस पोकर
हाईपर बोनस यसको दुई 12x गुणक दायरासँग हॉट रोलसँग धेरै नै छ। मुख्य अंतर यो हो कि कुनै पाईस हाइपर बोनस मा शामिल छैन।
बहु स्ट्राइक पोकर
यो खेलले तपाईंलाई चारवटा हातहरू प्ले गर्दछ, जुन स्तरहरूमा एकअर्काको शीर्षमा स्ट्याक गरिन्छ। प्रत्येक चोटि तपाईले जित्नुभयो, तपाई नयाँ स्तर / हातमा जान्नुहुन्छ। दोस्रो स्तरले 2x गुणक प्रदान गर्दछ, तेस्रो स्तरको 4x गुणक छ र चौथो स्तरमा 8x गुणक छ।
बहु स्ट्राइक पोकर सुपर टाइम्स पे
यो मल्टी स्ट्राइक पोकर जस्तो छ, बाहेक तपाईं अर्को सिक्का बिच गरेर प्रत्येक हातमा सुपर टाइम्स भुक्तानी सुविधा सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। सुपर टाइम्स भुक्तानी तपाईंलाई 10x सम्मको मूल्यमा एक अनियमित गुणक दिन्छ।
पीक र प्ले पोकर
अतिरिक्त2सिक्का शर्तको लागि, तपाईं Peek र Play सुविधा सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंलाई डिवार्ड गर्नु अघि पहिलो प्रतिस्थापन कार्ड देख्न सकिन्छ। यसले तपाईंलाई बचाउन वा कार्डहरू राख्ने तपाईंको हातलाई हानि पुर्याउन मद्दत गर्न सक्दछ।
छान्नुहोस् र जोडा पोकर
यो खेलले चारवटा कार्डहरू दोहोर्याउँछ - दुई बायाँ र दुई दाँयामा। तपाईं दाहिने हातमा राख्न र दुई कार्ड गायब गर्न दुईवटा कार्डहरू छान्नुहोस्। यसपछि, अन्तिम दुई कार्डहरू निलम्बित छन्, र तपाईंको5कार्ड ह्यान्ड पूरा भयो (गोल नगर्नुहोस्)।
???? 300% मिलान बोनस
???? € 120 टूर्नामेंट
???? € 390 फ्री चिप
💵 $ 680 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 670% पहिलो जम्मा बोनस
💵 € 1850 कुनै जम्मा रकम बोनस कोड
💵 यूरो 22 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 265% पहिलो जम्मा बोनस
💵 $ 2320 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 € 2265 कुनै जम्मा रकम बोनस कोड
💵 600% जम्मा मिलान बोनस
💵 $ 360 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 11 मुक्त क्यासिनो स्पिन
💵 € 565 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 £ 555 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 € 2475 ना जमा कैसीनो बोनस
💵 यूरो 3635 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 995% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 $ 270 निःशुल्क चिप
💵 € 4780 जम्मा बोनस कोड
💵 40 नि: शुल्क स्पिनहरू
💵 $ 165 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 € 2350 जम्मा रकम बोनस कोड
💵 £ 3910 जम्मा रकम बोनस छैन
💵 225% पहिलो जम्मा बोनस
💵 यूरो 635 नि: शुल्क चिप कैसीनो
💵 यूरो 4955 कुनै निवेदन छैन
💵 $ 130 फ्री कैसीनो टिकट
💵 200% उत्तम साइनअप बोनस कैसीनो
💵 355% साइन अप कैसीनो बोनस
💵 $ 145 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस
💵 $ 855 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 $ 2435 जम्मा रकम बोनस छैन
💵 यूरो 4970 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस
💵 पाउन्ड 345 टूर्नामेंट
💵 यूरो 680 कैसीनो चिप
💵 EUR 3070 जम्मा रकम बोनस कोड छैन
💵 € 315 फ्री चिप कैसीनो
💵 $ 390 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 990% क्यासिनोमा मिलान
💵 $ 360 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 पाउन्ड 80 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 165 फ्री स्पिन कुनै जम्मा छैन
💵 EUR 4920 NO DEPOSIT CASINO BONUS
💵 यूरो 4680 जम्मा बोनस कोड छैन
💵 € 80 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 € 525 फ्री चिप कैसीनो
💵 £ 340 NO DEPOSIT BONUS CASINO
💵 EUR 111 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 यूरो 888 कुनै जम्मा बोनस कोड
💵 $ 670 फ्री कैसीनो टिकट
💵 EUR 325 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 EUR 3585 जम्मा छैन
💵 305% क्यासिनोमा मिलान
केनोको जड चीनमा छ, र यो खेल चिनियाँ आप्रवासीहरूले देर देखि ...
यदि तपाईंले यी अनलाइन स्लट खेल्नुहुन्छ के तपाईलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बैंकक स्पष्ट रूपमा नयाँ लस भेगास हुनुहुन्छ! ...
रयल राजा पोटी
तपाईंको शर्त छनौट गर्न शर्त दायाँ '+' र '-' बटनहरू तपाईंको शर्त प्रति रेखा चयन गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। विन लाइनहरू निश्चित छन् ...
ज्याक वा राम्रो3हात अपडेट गरिएको: जनवरी 16, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 ज्याक वा राम्रो3हात
3.0.0.0.1 शुद्ध प्लैटिनम
3.0.0.0.2 Jekyll र हाइड
3.0.0.0.4 Dr jekyll र mr hyde mobile
3.0.0.0.6 जैकपोट केनो
3.0.0.0.7 जादुई क्रिस्टलहरू
3.0.0.0.8 स्प्रिङ ब्रेक
3.0.0.0.9 बैंकक रात
3.0.0.0.10 छ करोड डलर मानिस
3.0.0.0.11 थन्डर रिल्स
3.0.0.0.12 Cops and Bandits
3.0.0.0.13 विशालको सुन
3.0.0.0.14 रयल राजा पोटी
3.0.0.0.15 भाग्यको बेल
3.0.0.0.18 सिंहासन 243 तरिकाको खेल
3.0.0.0.19 स्पीड नगद
3.0.0.0.20 काउओबी खजाना
3.0.0.0.21 स्पिनटा ग्रैंडे
3.0.0.0.22 टोटोन कार म्यान
3.0.0.0.23 पाई गोव पोकर
3.0.0.0.24 फायर जोकर